ခက်သလားဟေ့ Database - MYSTERY ZILLION
October 2009 edited February 2010 in MZ Blog
ကိုသာသာ ရေးထားတဲ့ ခက်သလားဟေ့ Database နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရန်။
oracle database ထဲမှာ ရုပ်ပုံတွေသိမ်းလို့ ရမလား.............? ရတယ်လို့တော့ပြောကြတယ် ဘယ်လိုသိမ်းရမှာလဲ..........?
folder နဲ့ ကျွန်တော်က သိမ်းထားပေမယ့် database ထဲမှာပဲ တပါတည်းသိမ်းရင် ပိုကောင်းမလားလို့ပါ
Use bfile or blob datatype.
CREATE TABLE images(id number, image bfile);
INSERT INTO images VALUES(1, bfilename('Files_Directory','abcd.gif'));
ပြန်ထုတ်ကြည့်တာတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာစမ်းကြည့်တော့ ဒီလောက်ဆို ဆက်လုပ်လို့ရပါပြီ